Isbeddelka Cimilada oo 20 malyuun oo qaxooti ah galin doona Yurub – Kasmo Newspaper
Isbeddelka Cimilada oo 20 malyuun oo qaxooti ah galin doona Yurub
Updated - November 3, 2017 6:54 pm GMT
London (Kasmo), Sare u kaca heerkulka Dunida wuxuu, 20ka sano ee soo socota, ka abuuri doonaa, Afrikada Sub-Sahara, 20 malyuun oo qaxootiga Cimilada ah oo u hayaami doona dhanka Yurub.
Sidaas waxaa qoraysa Daraasad uu soo qaatay Wargayska Guardian, lagana sameeyay Ururka Ngo-ga deegaanka khuseeya ee Britain oo lagu magacaabo “EJF” (Environmental Justice Foundation).
Stephen Cheney, Jeneraal hore oo Maraykan ah oo la hadlay Ururkaas ayaa yiri: “Haddii Yurub maanta la daala-dhacayso soo-galootiga eega waxa dhici doona marka isbeddelka Cimiladu, dadka ka soo jafo Afrika, gaar ahaan Gobolka Sahel. Mana ahan 1 ama 2 malyuun oo qofood, ee waa 10 ama 20, kuwaas oo an aadi doonin Koofur Afrika, laakiin ka soo tallaabi doona Badda Dhexe (Mediterranean Sea)”.
David King, La-taliyihii hore ee Xukuumadda Britain dhinaca Sayniska, ayaa ku faalleeyay: “Waxa aynu ka hadlayno waa halis dhab ah oo ku soo wajahan, muddada dheer, xadaaraddeenna. Muddada dhow waxay keenaysaa halis kasta oo suuragal ah, waxayna u baahantahay jwaab aadmainimo oo heerkeeda oo kale aan horey loo gaarin” ayuu ku soo xiray.
Qaylodhaanta Environmental Justice Foundation waxay ka digaysaa in xaaladaha ka jira Afrikada Saxaraha ka hooseysa abuuri doonaan qulqul dadeed oo soo haajira oo aan wali horey loo arag taariikhda.
Daraasadda oo la baahiyay Khamiistii shalay, waxay xukuumadaha ka codsanaysaa in ay diyaariyaan qorshe sharci ku dhisan oo lagu badbaadinayo qaxootiga Cimilada, iyo farriin ku socota Shirka Cimilada ee toddobaadka soo socda ka dhici doona Jarmalka, oo ah sidii madaxdu u kordhin lahaayeen dadaalkooda, si loo gaaro bartilmaameedkii Heshiiskii Paris ee Cimilada.